Xalka - gomymobi.com
Bixinta Xal xoog leh
Sameyso ganacsigaaga guul & duul sare !!!
gomymobi.com waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad si deg deg ah, fudud & waxtar leh u dhisto goobaha ganacsigaaga. Dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah soo bandhigida meheraddaada iyo alaabooyinkaaga hal abuurka leh adduunka.
Soo ogow astaamo awood badan oo ka hooseeya oo aad u adeegsan karto qaabeynta iyo maaraynta joogitaankaaga internetka.
ama Hada Bilow
Aynu u soo bandhigno magacaaga sumcadda & wax soo saarka ugu fiican hal-abuurka qof kasta oo adduunka jooga oo leh dhisme dukaameedkaaga eCommerce. Waxaan kaa caawinaynaa inaad abuurto dukaamo aan xadidnayn, si aad u iibiso alaab aan xadidnayn; lacag la'aan wax macaamil ah, khidmad shaqaaleysiin lahayn; waxaad kasban doontaa 100% lacag bixinta waxaad iibiso.
Dukaan Furan & Iib
Macaamiisheena Cajiibka Ah Ayaa Jecel Xalalka Cajiibka Ah
Hadafkeena koowaad wuxuu diirada saarayaa inaan ka farxino macaamiisheenna. Haa, tani waa habka aan ugu shaqeyno ganacsigaaga, sidoo kale.
Xalka Ganacsi ee Hore
Tifatiraha Koodhka Custom
Macmiil & Alaab Fudud
Ka bilow dhismaha websaydhkaaga ganacsiga xoq ama ka soo xusho arrimo badan oo naqshadeeye sameeye ah. Adoo adeegsanaya kuwa ugu casrisan adduunka ee dhisaya degelka, waad qaabeyn kartaa oo horumarin kartaa degel kasta oo aad u baahan tahay ama aad rabto.
Isku day Element Builder bilaash
Ku lifaaq kaabayaasha ganacsiga hodanka ah goob kasta. Dhammaan eCommerce, qulqulka, iyo xalka xubinnimada si buuxda ayaa loo ilaaliyaa waxayna la yimaadaan dabeecad jawaab celin leh.
Wax Ka Baadi Goob
Dhis barnaamijyada horumarsan ee webka adoo adeegsanaya tifaftiraha koodhka gaarka ah si aad ugu darto ama aad wax uga beddesho wax kasta oo aad rabto. Maamul dhammaan waxyaabaha culus ee ka dambeeya muuqaalka oo si qurux badan ugu muuji qaabab soocelcelinta jawaabta leh.
Iibso rukunno xilli kasta, xubinnimo iyo xirmooyin loogu talagalay adeegyada, badeecadaha dalwaddii ah, waxyaabaha ay ka kooban yihiin, jaaliyadaha iyo softiweerka Bixiyaan lacag-bixinno soo noqnoqda ama hal mar oo noocyo badan oo xilliyo tijaabo ah adoo adeegsanaya bixiyeyaal lacag-bixinno kala duwan oo aamin ah.
BILAASH websaydhkaaga ganacsiga
gomymobi.com waxay ku faraxsan tahay inay kaa caawiso inaad abuurto goobtaada ganacsi ee ugu horreysa, oo aad ku martigeliso BILAASH intaad nooshahay.
Xisaab Bilaash ah
Diiwaangelintu waa mid aad u fudud oo dhakhso leh, looma baahna kaarka deynta; iyo koontadaada bilaashka ah & bogga ganacsigaagu weligiis ha nala joogo.
Fur dukaamada aan xadidnayn
Haddii aad u baahato inaad furto dukaamo khadka tooska ah aan xad lahayn si aad u iibiso alaabooyin badan oo kala duwan, waxaa laga yaabaa inaad dhammaan si fudud u sameyso.
Iibi alaabooyin kala duwan
Barnaamijkeenna eCommerce, waxaad awood u leedahay inaad ku iibiso wax soo saarka dhijitaalka ah iyo midka jirka, iyo xitaa rukhsadaha isla dukaanka si fudud.
Magaca Domain Custom
Haddii aad horey u laheyd domain oo aad rabto inaad u adeegsato degel la abuuray, kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku wareejiso degelkan ka dibna ku socodsiiso boggaaga ganacsiga meheraddan gaarka ah. Goobtaada ganacsi waxay umuuqataa mid xirfad badan leh domain caadadiisu tahay.
Ka soo rar FTP
Haddii aad leedahay marti-qaade gaar ah oo aad rabto inaad martigeliso websaydhkaaga la abuuray, waxaan leenahay qalab sahlan oo kaa caawinaya inaad ku dhejiso dhammaan faylasha websaydhka martidaada hal guji. Ama waxaad kala soo bixi kartaa bogga oo dhan gudaha.
Subdomain gaar ah oo loogu talagalay bog kasta
Awood u leedahay inaad daabacdo oo aad ku keydiso goobtaada ganacsi adigoo gujinaya 1 guji oo keliya.
Macaamiil qiimo jaban oo dabacsan
Markaad ku qanacdo xalalkeena, waxaan bixinaa rukumo badan oo macquul ah si kor loogu qaado koontadaada si aad uhesho astaamo awood badan.
Ku kasbo iibinta Shatiga Mawduuca
Waxaad awood u leedahay inaad lacag naga kasbato annaga, adoo ka iibinaya rukhsadahaaga mawduucyada isticmaaleyaasha kale. Waxaad heli doontaa dhammaan dakhliga, wax lacag ah kama qaadno.
Suuqa Mawduuca Websaydhka
gomymobi.com sidoo kale waa goob ay isticmaalayaasha oo dhami ku iibiyaan mawduucyada ay jecel yihiin, abuureyaashu waxay ku bixin karaan mawduuc bilaash ah ama ku iibin karaan 2 liisanka: abuur kasta ama noloshiisa.
Sida iska cad, hal abuureyaashu waxay ku dhejin karaan nambarkooda xayeysiinta (ama madal) mawduucyadooda mar ay jeclaan lahaayeen inay ku siiyaan bilaash.
Bogagga & bogagga aan xadidnayn
Waad abuuri kartaa degello aan xadidnayn oo degel kasta sidoo kale waxaad u abuuri kartaa bogag aan xadidnayn.
Dhisme gawaarida lagu rakibo
Waxaan haynaa raadiyaha taraafikada ee kugu caawinaya inaad tiriso booqashooyinka & aragtiyada bogga, tirakoobyadan waa lala socon karaa maalinba maalinta ka dambeysa.
Xaqiiqdii, waad soo galin kartaa bartaada kale ee tracker, sida Google Analytics si fudud oo dhaqso ah.
Goobaha iyo mawduucyada si buuxda uga jawaaba
Dhammaan mawduucyada iyo boggagguba waa kuwo si buuxda u jawaaba oo moobiil saaxiibtinnimo leh, oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan go'aannada shaashad kasta ee daalacashada casriga ah.
Iyo ka sii muhiimsan, Gudida Xakamaynta & Isticmaalka Isticmaalaha ayaa sidoo kale si buuxda wax uga qabta, adeegsadayaashu maareyn karaan & abuuri karaan boggaga markasta iyo meel kasta.
Nidaamkeena waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo shabakadahaaga iyo bakhaarkaaga xawaaraha & waxqabadka ugu fiican.
Moodooyinka Cajiibka ah
Ka dooro wax ka badan 95 mawduucyada naqshadeeye ee goobta lagu sameeyay ee ganacsi kasta oo aad jeceshahay inaad dhisto.
Wadarta Xorriyadda Naqshadeynta
Naqshadeyso oo u horumariso bartaada sida saxda ah ee aad u rabto jaangoyntayada hal-abuurka leh iyo hoos u dhaca.
In kor loo qaado Browser Media
Ku soo bandhig sawiradaada, fiidiyowyadaada ama wixii alaab ah ee wax badan leh ee muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka qurxoon leh Browser-keena Warbaahinta xoogga leh.
Bakhaar qurux badan
Kusoo bandhig oo ku iibso alaabadaada dijitaalka ah ama jirkaaga ah iyo adeegyada ama ganacsiga meherad qurux badan oo dukaanka ah.
Bakhaarka & Maareeyaha Alaabta
Raadraac dhammaan amarrada oo ka maamul maaddooyinkaaga go'aamo kasta: desktop, laptop, tablet ama mobile.
Hababka Lacag Bixinta Badan
Sii xal lacag bixin oo la isku halleyn karo taas oo ka dhigaysa macaamillada khadka tooska ah mid fudud oo aamin ah adiga iyo macaamiishaada. Aqbal kaararka deynta, PayPal, Stripe, Authorize.net, lacag bixinta qad la'aanta iyo inbadan - komishan bilaash ah.
Kuuboonada iyo qiimo dhimista
Kordhi iibka dukaamanka adoo siinaya qiimo dhimis xilliyeed iyo rar bilaash ah amarrada dhacdooyinka gaarka ah.
Noo oggolow inaan kor u qaadno ganacsigaaga oo aan sare u qaadno !!!
Dhis boggaaga iyo dukaamada HADA